Mootummaa fi hoogganoota TPLF gidduu ‘mariin itti fufee jira’- Hooggantuu UN | OROMOTV
Mootummaa Itoophiyaafi hoogganoota TPLF gidduu ”mariin itti fufee jira” jedhan barreessitu itti aantuun Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Amiinaa Mohaammad.
Yaa’ii Gamtaa Afrikaaf Finfinnee kan turan aadde Amiinaa Mohaammad, tibba kana naannolee waraana Kaaba Itoophiyaan miidhaman-naannoo Amaaraa, Affaariifi Tigraay daawwachaa turan.
Turtii isaanii kanaanis hooggantoota TPLF waliin Tigraayitti, aanga’oota naannolee Affaariifi Amaaraa akkasumas mootummaa federaalaa waliin mariyataniiru.
Uhuruu Keeniyaataa fi Antooniyoo Guutires Itoophiyaatti warananni akka dhaabbatuuf gaafatan
TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu mariin al-kallattii adeemaa jiraachuu Dabratsiyoon dubbatan
Xumura daawwannaa isaanii naannolee sadanii booda Finfinneetti miidiyaaleef ibsa kan kennan Amiinaan waraanni guutummaatti akka dhaabatu irra deebiin waamicha taasisaniiru.
Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Gamtaa Afrikaa kan ta’an Oliseegoon Obasaanjoo waliin naannolee kana kan daawwatan Amiinaan ”waraanni amma jiru kan ji’oota muraasa dura tureen gadiidha” jechuun abdiin waraanicha xumuruu akka jiru dubbatan.
Barreessaan Olaanaa Antooniyoo Gutaareez dhiyeenya ibsa kennaniin jaarsummaan abdii horaa jiraachuu himanii kan ture yeroo ta’u, Amiinanis dhuma daawwannaa isaanii kana irratti ”dhugumatti haala gaariirra jira, mariin baayyeetu jira” jedhan.
Waraana ji’oota 15 oliif biyya kutaalee Kaaba Itoophiyaa hedduu gaaga’eefi namoota miiliyoonaan lakkaawwaman rakkoo namoomaa jabaaf saaxile nagaan xumuruuf yaalii Obasaanjoon gochaa jiraniin cinaatti Keeniyaanis tattaaffii abdii qabu gochaa akka jirtu himama.
Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa’eel(PhD) torbanoota lama dura BBC’tti yoo dubbatan, mootummaa federaalaa waliin ”mariin al-kallattii” gaggeeffamaa akka jiru himanii ture.
Battala sanitti Ministirri tajaajila Kominikeeshinii mootummaa Laggasaa Tulluu(PhD) Doche Weeleef yaada kennaniin ”ammatti mariin eegalem hin jiru” jedhanii, mootummaan karaa nagaa waraana kana xumuruuf balaballi isaa banaadha jedhanii ture.
Waraana kanaan walqabatee ammaan tana dubbiin araaraa fi jaarsummaa abdii horatee dubbatamaa jiraatus, naannoo Affaar keessatti humnoota TPLF fi humnoota addaa naannoo Affaar akkasumas kan mootummaa federaalaa gidduu ”waraanni jabaan” adeemaa akka jiru fi aanaaleen shan naannoo Affaar keessa jiran harka hidhattoota TPLF galuu mootummaan naannoo Affaar ibsaa jira.